Superegg Rakibaadda Farshaxanku - Joornaalka Naqshadeynta
Rakibaadda Farshaxanku Superegg waxay matalaysaa isu-duwidda deg-degga ah ee kaabashka qaxwada keliya ee la isticmaalo, taas oo astaan u ah u habboonnaanta aadanaha iyo saamaynta ay ku leedahay deegaanka. Waxay u muuqataa meel sare oo dhulka ka muuqata, qaab superegg leh oo jumladaysan oo qoraal ah, sida uu caddeeyay xisaabiye Gabriel Lame, waxaa lagu sawiray kafeega qaxwaha ah ee la tuuray oo loo habeeyay qaab qumman. Khibradda muuqaalka ayaa ka kooban aragtida dhammaan xaglaha iyo masaafada. In kabadan 3000 kaabsoosha ah ayaa lagusoo aruuriyay wicitaan talaabo looga qaadayo warbaahinta bulshada iyo bulshada deegaanka. Superegg wuxuu u oggolaanayaa daawadaha inuu haasaawo qashinka oo ku dhiirrigeliyo caadooyinka dib u warshadeynta.
Magaca mashruuca : Superegg, Magaca naqshadeeyayaasha : Jaco Roeloffs, Magaca macmiilka : Jaco Roeloffs.
Rakibaadda Farshaxanku Jaco Roeloffs Superegg